Inona ny fifaninanana Invitation any Gulf?
Inona ny fifaninanana golf amin'ny 'Invitation'?
Ny "fanasana" dia karazana gara mpilalao golf izay ahitana mpilalao baolina kitra izay voafetra ihany dia voafetra ho an'ireo izay nanasa fanasana hilalao, na efa nahafeno ireo fepetra efa nomanina efa nahafeno azy ireo ho tonga fanasana.
GV Invitationals vs. Opens
Ny Invitationals ary ny fisokafana dia ny karazam-bolo goavambe roa lehibe indrindra, toy ny fametrahana ny karazana lisitry ny mpilalao. (Ny fahatelo, ny akaiky na ny famaranana, dia karazana fifanintsanana izay voafetra ho an'ny mpilalao baolina maromaro.
Ny Irish Close Amateur, ohatra, dia voafetra ho an'ireo mpilalao golf izay avy any Irlandy.)
Ny "fanasana" dia misaraka amin'ny " misokatra " toy izao: Ny Fikambanana "Podunk Golf Association Invitational" dia misokatra ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Fikambanana Golf Golf na ireo mpilalao golf izay asaina manokana ny Lalao Podunk Golf. Na izany aza, ny Fikambanana Podunk Golf Open dia misokatra ho an'ny mpilalao golfer ao amin'ny fiarahamonina izay te handray anjara ary izay nihaona tamin'ny fepetra napetraky ny fikambanana.
Ny Invitationals vs. misokatra ao amin'ny Championship Major
Misy efatra lehibe amin'ny lalao golf amin'ny lehilahy. Ny roa amin'izy ireo dia misokatra ary ny roa amin'izy ireo dia fanasana:
Ny Masters sy ny PGA Championship dia fanasana;
Ny US Open sy ny British Open dia tsy mahagaga, misokatra.
Ny amerikana sy ny britanika dia samy manana fepetra ho an'ny mpilalao golfe izay te-hanandrana hilalao (be loatra ny tranga, fidirana fidirana). Saingy ny mpilalao golfa rehetra afaka mahafeno ireo fepetra ireo dia afaka manandrana milalao eny an-kianja amin'ny fidirana amin'ny hetsika kalitao.
Ny Masters sy ny PGA Championship, etsy ankilany, dia tsy misokatra ho an'ireo izay te hiezaka ny ho mendrika. Izy roa dia samy mampiasa lisitry ny fepetra fanatanjahan-tena mahazatra, ary ny mpilalao golf maro ihany koa no manasa azy ireo hilalao. Tsy misy fomba iray ho an'ny mpilalao golfa amin'ny antsantsa mba hanandrana ny handeha hiditra ao amin'ireo sehatra ireo ivelan'ireo fepetra fanamarinana mahazatra.
Izany no mahatonga azy ireo fanasana.
(Mariho fa misy singa misokatra ho an'ny PGA Championship-PGA mpikirakira klioba dia afaka miditra amin'ny fifaninanana amin'ny PGA Professional Championship. Ireo mpilalao golfa dia nomena toerana 20 ao amin'ny sahan'ny PGA Championship, ny ambiny dia feno toy ny fanasana .)
Raha ny fiadiana ny tompondakan'i Madagasikara dimy lehibe indrindra:
Ny Etazonia sy ny Anglisy misokatra dia mazava ho azy fa misokatra.
Ny ANA Inspiration , ny PGA Championship ny vehivavy ary ny Evian Championship dia fanasana.
(Mariho fa misy marika kely maromaro eny an-kianja ho an'ireo fanasana telo ireo dia atolotra amin'ny alalan'ireo kalitao, ary manome azy tsirairay amin'ny toerana kely "misokatra".)
Mpanazatra efa ela
Manazava ny fitsipi-pitenenan'ny gulf 'Voalamina voatondro'
Ahoana no hampiaretanao ny volonao?
Ny baolina kitra ao amin'ny gile sy ny fomba ampitahan'izy ireo amin'ny baolina mahazatra
10 karazana fiakarana
Ianao dia mpilalao gymnast iray tamin'ny '80 sy 90s raha ...
Famerenana - Famaritana sy fanazavana
Miaraka amin'ny fifaninanana Ice Skating ny mpihazakazaka rehetra tokony hahalala
Inona no atao hoe "Flight" amin'ny fifaninanana golf?
Iza no tsara indrindra amin'ny hazo saka?
Mianara milalao tennis
Ahoana ny fikarohana ireo razam-be riana
Ady lehibe faharoa: USS Idaho (BB-42)
Fanadihadiana momba ny toetran'i Helena sy Demetrio
Famaritana sy Ohatra ho an'ny Monomer (Chemistry)
Nahoana ny Rastas Smoke Ganja sy ny Dreadlocks?
Inona ny Fandikan-tenin'ny Fitopolo?
Adihevitra momba ny fahamendrehana Shakespeare
Ny Sojourner Truth dia mitanisa ny fanafoanana sy ny zon'ny vehivavy
Facts sarotra mivaivay: statistika momba ny zaza tsy ampy taona
University ao amin'ny Buffalo GPA, SAT sy ACT Data
Fandinihana momba ny fiteny
Jazz Biografies Jazz
Adihevitra momba ny vavaka any amin'ny sekolim-panjakana
Mpanjifa sy Curtesy
Asehoy ny fomba fampiasana ny teny ampiasaina
Fahatakarana ny Particule ankehitriny sy taloha
Inona no atao hoe Green ao amin'ny Fitsipika (GIR)?
Andro farany amin'ny hetsika ataon'ny sekoly
Ampaherezo io vavaka io ho an'ny Ray namanareo